कर्णालीमा कलिलै उमेरका महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या किन ?
# स्थानीय तह निर्वाचन
# सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
# नीति तथा कार्यक्रम
मंकीपक्सको जोखिम, विदेशबाट आएकाहरु २ हप्ता क्वारेन्टिन बस्नपर्नेु
२,७१७ परीक्षण गर्दा ५ जनामा कोरोना पुष्टि
उपचारका लागि सिफारिस माग्दा वडाअध्यक्षले निकाले चुनावको रिस
सरकारी अस्पतालमा जन्मिएका छोरीको जीवन बीमा गरिदिने रेणु दाहालको निर्णय
विज्ञलाई रोष्टरमा सूचीकृत हुन चिकित्सा शिक्षा आयोगको आह्वान
डा.टेड्रोस दोस्रो पटक डब्लुएचओको महानिर्देशक निर्वाचित
मंसिर ०८, २०७८ १९:३९ मा प्रकाशित
महिलामा देखापर्ने प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरुमध्ये पाठेघर खस्नु प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो । १० वर्षअघिसम्म तराईका जिल्लामा ३० प्रतिशत र पहाडका जिल्लामा ७० प्रतिशत महिला पाठेघर (आङ) खस्ने समस्याबाट पीडित थिए ।
सुत्केरी समयमा उचित हेरचाह, स्याहार नहुँदा, गह्रु‌गो काम गर्न बाध्य हुँदा, कम समयको अन्तरालमा धेरै बच्चा जन्माउँदा महिलाहरूमा पाठेघर खस्ने समस्या देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा शहरका महिलाहरुमा यस्तो समस्या कम देखिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको सहज पहुँच नभएका ग्रामीण भेगका महिला यो समस्याबाट धेरै पीडित छन् ।
कर्णाली प्रदेशका ग्रामिण क्षेत्रका महिलामा कलिलै उमेरमा पाठेघर खस्ने समस्या देखिने गर्छ । उनीहरु सकेसम्म समस्या लुकाउँछन् । अस्पताल आउँनै चाहदैनन् । बेलाबखत गाउँ-गाउँमा सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य शिविरमा पाठेघर खस्ने समस्या लिएर आउने महिलाको संख्या धेरै हुन्छ ।
यस विषयमा हामीले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला पुगेर स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा.सुबी बस्न्यात बज्राचार्यसँग कुरा गरेका छौ‌ँ । उहाँ विगत ८ वर्षदेखि कर्णालीमै कार्यरत हुनुहुन्छ । उहाँ कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा स्वास्थ्य शिविरमा समेत पुगेर स्वास्थ्य जाँच गर्दै आउनुभएको छ ।
कर्णाली धेरै जसो महिलामा देखिने स्वास्थ्य समस्या के-के हुन् ?
स्त्रीरोग विभाग अन्तगर्त रहेर विशेषगरि १६ वर्षभन्दा माथिका महिलाको जाँच हुन्छ तर १५ वर्षभन्दा मुनिका बालिका जसलाई स्त्रीरोग सम्बन्धी समस्या देखिएको छ उहाँहरुको पनि हामी जाँच गर्छाैँ । यहाँ म आएको ८ वर्षको अन्तराललाई केलाउँदा यहाँका महिलाहरुको ठूलो समस्या भनेको पाठेघर खस्ने समस्या हो ।
यहाँका ३० वर्षमाथि अर्थात् कलिलै उमेरका महिलाहरुमा देखिएकाे छ । खासमा याे समस्या ५० वर्ष नाघेपछि मात्रै देखिनुपर्ने हो । यहाँ भौगोलिक जटिलता, जनचेतनामव अभाव जस्ता कारणले सानै उमेरका महिलाहरु पनि यो समस्याबाट पीडित भइरहेका छन् । जुम्लासहित रुकुम, जाजरकोट, बाजुरा कालिकोट जिल्लामा पाठेघर खस्ने समस्या धेरै छ ।
पाठेघर खस्नुका कारणहरु के हुन् ?
सानो उमेरमा विवाह गर्ने, सुत्केरी भएलगत्तै गह्रौ भारी बोक्ने, स्वास्थ्य सेवाबाट नपाउँने, सुत्केरी हुँदा राम्रो स्याहार-सुसार नपाउने, कम अन्तरालमा धेरै सन्तान जन्माउने जस्ता कारणले महिलामा पाठेघर खस्ने समस्या देखिने गरेको छ । कर्णालीमा महिलाहरुको काम गर्ने तरिका, जीवनशैलीले उनीहरुमा छिट्टै पाठेघर खस्ने समस्या देखिएको हो ।
यहाँका महिलाहरुको दैनिकी निकै कष्टकर छ । धेरै स्थानमा बाटाहरु अप्ठेरा छन् । खानेपानी, घाँस दाउराका लागि महिलाहरु घण्टौ उकालो ओरालो हिड्नुपर्छ । अर्काे कुरा गर्भवती हुँदा हेरचाह हुँदैन, परिवारको सहयोग हुँदैन । यिन कारणले यहाँका महिलामा यो समस्या बढी देखिन्छ।
अहिले पनि छोराका लागि धेरै बच्चा जन्माउने प्रवृति कायमै छ । १६ वर्षको कलिलै उमेरमा किशोरीहरुले बच्चा जन्माउनु परिरहेको छ । छोराकै लागि १६ पटकसम्म गर्भवती भएकी महिला पनि भेटेको छु । जाजरकोटमा ३ महिना अगाडि शिविरमा जाँदाको कुरा हो अन्दाजी ४० वर्षकी महिला हुनुहुन्थ्यो । उहाँले ४० वर्षको उमेरमा १६ पटक गर्भवती भएकोे सुनाउनुभएको थियो । छोराका लागि पटक-पटक गर्भवती हुनपरेको दुखेसो उहाँको थियो । कम अन्तरालामा धेरै बच्चा जन्माएकै कारण उहाँको पाठेघर खसेको थियो ।
अस्पतालमा उपचारका लागि महिलाहरु कस्तो अवस्थामा आइपुग्छन् ?
पाठेघर खस्ने समस्या जुम्लामा अलि कम छ । अन्य जिल्लाको तुलनामा भौगोलिक दृष्टिकोणले जुम्ला सुविधासम्पन्न पनि छ । र यहाँ पाठेघर खसेका धेरै महिलाको शल्यक्रिया पनि भइसकेको छ ।
तर अन्य जिल्लामा भने महिलाहरुको दैनिकी अत्यन्तै कष्टप्रद छ र उनीहरु सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा आउन सकेका पनि छैनन् ।
अर्काे कुरा भनेको अहिले पनि महिलाहरु रोगबारे आफ्नै परिवारलाई भन्न लाज मान्छन् । कतिपय महिलाहरु उपचार गर्दा खर्च होला भन्ने डरले रोग लुकाएर बस्नुभएको पनि मैले भेटेको छु । तर गाउँ-गाउँमा जब स्वास्थ्य शिविर जान्छ र त्यहाँ उपचार निशुल्क भनिन्छ त्यतिबेला उपचारमा आउने महिलाहरुको भीड लाग्छ ।
उहाँहरुलाई यतिञ्जेल उपचार गर्न किन नआउनुभएको भनी सोध्दा पैसा नभएर, भन्न लाज लागेर, बुढेशकालमा अपरेशन गरेर पनि के हुन्छ र ? भन्ने खालका जवाफ दिनुहुन्छ ।
उहाँहरु आफ्नो अवस्था जटिल भइसक्दासमेत उपचारमा आउनुहुन्न र परिवारले पनि यसबारे ख्याल राखेको पाइन्न । तर उहाँहरु यस्तो अवस्थामा उपचारमा आउनुहुन्छ की, पाठेघर खसेर हिँडडुल गर्न अप्ठेरो भइसकेको हुन्छ । आङ खसेर रगताम्मे भइसक्दा पनि उहाँहरु अस्पताल पुग्नुहुन्न ।
पाठेघर खस्दा कस्ता-कस्ता समस्या देखिन्छन् ?
सुरु–सुरुमा योनीमा केही निस्केर बसेको जस्तो महसुस हुन्छ । बिस्तारै पिसाब फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लाग्दा, हिँड्दा, पेटमा बल पर्दा पिसाब चुहिने तथा ढाड दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।
त्यस्तै, योनीबाट सेतो पानी बग्ने, बसेर काम गर्न असहज हुनेजस्ता लक्षण पाठेघर खस्नुअघिका लक्षण हुन् । यी लक्षण देखिनेबित्तिकै तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्था पुगिहाल्नुपर्छ । बैलेमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न सके त्यही अनुसारको उपचार सुरु गर्न सकिन्छ ।
पाठेघर खस्नुका पनि विभिन्न चरणहरु हुन्छन् । बिरामीको अवस्था हेरेर विभिन्न तरिकाबाट गर्न सकिन्छ । जसमा व्यायाम, रिङ पेसरी र शल्यक्रिया मुख्य हुन् । यदि पाठेघर अलिकति मात्र तल खसेको छ, अर्थात् चिकित्सकीय भाषामा पहिलो चरणमै छ भने सामान्य व्यायाम गराएर उपचार गराउन सकिन्छ ।
गुप्तांगमा रिङ पेसरी राखेर झरेको पाठेघरलाई भित्रै अड्काएर राख्ने विधिलाई रिङ पेसरी भनिन्छ । यो प्रयोग गरेको प्रत्येक तीन महिनामा फेर्नुपर्ने हुन्छ  ।
महिलाको पाठेघर बाहिरै निस्केको भए शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन्छ । शल्यक्रियाबाट कसैको पाठेघर पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिन्छ भने कतिपयमा अवस्था हेरेर पाठेघर निकालेरसमेत उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तिम स्टेजमा पाठेघर निकाल्ने हो । तर दुर्भाय भन्नुपर्छ, यहाँका अधिकांश महिलाहरु अन्तिम अवस्थामा नै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ ।
डा.सुबि बस्नेत बज्राचार्य
हजुरआमालाई गोली हानेर स्कुल गएका किशोरले १८ जनाको हत्या गरे
स्वास्थ्य सेवा चौथो तहमा ठूलो संख्याका लागि लोकसेवाले खुलायो विज्ञापन
डा.सुबी बस्न्यात बज्राचार्य
डा.भोजराज शर्मा काफ्ले
मल्टिमिडिया : सन्तोष राई